Sekoly Fitaratra Ao Haiti Mampianatra Ireo Ankizy Amin’ny Teny Kiriolona Fa Tsy Amin’ny Teny Frantsay · Global Voices teny Malagasy
Sekoly Fitaratra Ao Haiti Mampianatra Ireo Ankizy Amin'ny Teny Kiriolona Fa Tsy Amin'ny Teny Frantsay
Voadika ny 29 Desambra 2014 20:04 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, polski, Català, English
Mpianatra kilasy faha-5 ao amin'ny Sekolim-piarahamonina Matenwa ao Haiti. Sary: Amy Bracken (nahazoan-dalana)
Navoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 22 Desambra 2014 ity lahatsoratra sy fanadihadian'ny onjam-peo notontosain'i Amy Bracken hoan'ny The World in Words ity ary navoaka indray ato amin'ny Global Voices noho ny fifanekena hifampizara votoaty.
Tovolahy 11 taona monina ao an-tanàna kely ao amin'ny nosy main-tany Lagonav, ao Haiti i Frandy Calixte. Mipetraka eo ala-tranony miaraka amin'ny reniny sady mpampianany, nilaza tamiko izy fa te ho lasa infirmiera rehefa lehibe, saingy nanitsy azy ny reniny.
“dokotera”, hoy ny reniny, sady nanitsy ny valinteniny.
Saiky mpamboly madinika avokoa ny olona rehetra eto, zara raha misy mahafantatra fampianarana ambonimbony kokoa. Saingy mandà ny mahazatra amin'ny fandehanana mankany amin'ny karazan-tsekoly: ny Matenwa Community School, [Sekolim-Piarahamonina Matenwa] izay eo ambanimbany kely fotsiny amin'ny lalana karaobato miala amin'ny trano fonenan'i Calixte.
Tsy mankasitraka ny fenitra ara-pampianarana Haisiana ihany koa i Matenwa. Tamin'ny fidiran'ny sekoly rehetra, mitsangana ny mpianatra ary mizara izay tsara sy ratsy tao an-tsekoly– ny lesona nankafizin'izy ireo, na ny antony tsy hitiavan'izy ireo ny fitondratenan'ireo mpianatra hafa na hatramin'ny mpampianatra aza. Ao an-dakilasy, mipetraka manao faribolana ny mpianatra, manaraka ny filôzôfian'ny sekoly, izany hoe tsy maintsy hita, re sy raisina am-panajana avokoa ny mpianatra rehetra,.
Misy ihany koa ny ampahany ilaina amin'ny fomban'ny sekoly, hoy ny mpiasa: mampianatra amin'ny tenin-drazan'ny mpianatra, Kiriolona, fa tsy Frantsay.
Tombanana eo amin'ny 5 isan-jato eo ireo mponina Haisiana mahafehy tsara ny teny Frantsay, kanefa mbola teny ampiasaina amin'ireo boky fianarana vatsian'ny governemanta ara-bola izany. “Fony izaho nianatra, tsy mba nianatra ny teny Frantsay izany mihitsy”, hoy ny renin'i Calixte, izay miantso ny tenany hoe Madama Frantz Calixte. Raha nanontaniako mikasika ny fomba nahatafitany tany am-pianarana izy, nihomehy sady niteny hoe: “Tsy tena afa-panadinana aho”.
Ary ny amin'ny zanakao lahy? “Mianatra tsara noho izaho izy ireo” hoy izy.
Nampianatra tamin'ny teny Frantsay manontolo ihany koa i Abner Sauveur, izay nihalehibe tao an-tanàna kelin'i Matenwa, na dia tsy mahatakatra izay nolazaina aza. Raha diso fanantenana noho ny sakana apetraky ny teny ireo mpampianatra, dia ireo mpianatra indray no ilan'izy ireo vaniny – ara-bakiteny.
“Ny fomba nikapohan'izy ireo ahy tany an-tsekoly, fantatro fa ratsy ny rafi-pampianarana”, hoy izy “Tsy afaka mianatra tahaka izany ny olona”.
Tsy nahavita fianarana ambaratonga faharoa i Sauveur. Saingy tamin'ny taona 1996, niara-nanorina ny Sekolim-piarahamonina Matenwa izy sy ilay Amerikana mpampianatra Chris Low mba hanolotra “fampianarana ahafahan'ny olona mandinika sy mizara hevitra”, hoy izy, “fampianarana ahafahan'izy ireo mianatra tsara kokoa”. Ilaina tokoa ny mampiasa ny teny Kiriolona.
Mampiasa ny teny Kiriolona i Matenwa amin'ny fampianarany rehetra sy amin'ireo boky fianarana hatramin'ny kilasy fahatelo, izay ny teny Frantsay no apetraka ho toy ny teny faharoa. Aorian'izany, amin'ny teny Frantsay avokoa ireo boky fianarana amin'ny taranja toy ny jeografia sy ny tantara, satria mbola tsy misy amin'ny teny Kiriolona ireo boky ireo..
Manantena ireo mpiara-manorina ny Matenwa fa indray andro any, ho amin'ny teny Frantsay sy Kiriolona avokoa ny boky rehetra. Hoan'ireo kilasy ambanimbany, manangom-bola ny ao amin'ny fitantanana hividianana boky amin'ny teny Kiriolona, ary mandray anjara manokana amin'izany koa ireo mpianatra.
Mpianatra kilasy fahadimy Kervenson Succès mamaky boky nosoratan'ny mpianatra, “A Cure for Being a Pest,” natao printy tamin'ny teny Kiriolona, Frantsay ary Anglisy. Tompony: Amy Bracken (Nahazoana alalana)
Saingy mbola maro ireo ray amandreny no mihevitra fa ny teny frantsay no tenim-pampianarana, eny fa na dia any amin'ny kilasy ambany aza. Ny fanoratra sy ny fitsipi-pitenenana no tafapetraka tsara kokoa noho ny an'ny Kiriolona, ary mbola misisika ihany koa ny finoana fa arakaraka ny hiatrehan'ny ankizy aloha kokoa ny teny Frantsay no hahatsara kokoa ny fahazoana azy – eny fa na dia tsy mahatakatra aza izy ireo amin'ny voalohany.
“Tena sarotra tokoa ny tamin'ny fanombohan'ny sekoly Matenwa,” hoy i Sauveur. “Misy ireo ray aman-dreny te-hanala ny mpianany tao an-tsekoly satria nampianatra tamin'ny teny kiriolona ry zareo.” Saingy efa namerina ny zanany tao Matenwa ireo ray aman-dreny ireo. Ankehitriny ny mpitarika ara-politika hatrany amin'ny praiminisitra no miantso ny hanamafisana bebe kokoa ny fanabeazana kiriolona, ary miantso an'i Matenwa ho fitaratra ry zareo.
Jonès Lagrandeur, ny lehibe mpanara-mason'ny sekoly mihoatra ny 200 tao amin'ny nosy Lagonav, ihany koa tamin'ny voalohany dia nitsipaka ny fampianarana tamin'ny teny kiriolona. “Mazava loatra! Noho ny fomba nanabeazana anay,” hoy izy. “Saingy nihatakatray tsara kokoa izany avy eo. Niketrona aho tamin'ny voalohany, saingy mpankasitraka mandra-maty aho amin'izao fotoana izao. Hatramin'ny nizoran'i Matenwa, dia namadika pejin'ny tantara isika.”
Nanolotra fanofanana hoan'ny mpanabe hoan'ny mpanabe manerana ny firenena tamin'ny “tenin-dreny” ihany koa i Matenwa, saingy miasa matetika miaraa amin'ny sekoly manodidina. Nanambara i Lagrandeur fa izany no antony nahatsara indrindra ny valim-panadinana tao amin'ny nosy tamin'ity taona ity.
Michel DeGraff, Haisianina iray mpandinika ny teny maro miasa ao amin'ny MIT, nilaza fa efa nasehon'ny fitsapana nataon'ny Banky Mondialy fa in-telo avo heny noho ny salan'isa ankapoben'ny sekoly 84 tao amin'ny tanibe ny fahaizan'ny mpianatra mamaky Kiriolona ao Matenwa.
Nilaza i DeGraff fa afa-miteny izy hoe tsy mahomby ny fanabeazana mifototra amin'ny teny frantsay amin'ny fihainoana fotsiny ny olona mianatra. “Karazana fibadabadam-piteny fotsiny, izay matetika tapaka eny antenantenany ny fehezanteny,” hoy izy, “izay midika fa tsy azony akory ny zavatra ianarany.” Tahaka izany ihany no efa nataony fony fahakely, tamin'ny fotoana nanaovana tsinontsinona ny kiriolona tany an-tsekoly nianarany.
Ankehitriny amin'ny maha-mpikamban'ny Akademia Kiriolona vaovao azy, dia miezaka i DeGraff mampiroborobo ilay fiteny any amin'ny sehatra rehetra. Saingy ny tena ifantohany dia ny ao amin'ny fanabeazana, ka tafiditra amin'izany ny fitaovana hanampiana ny mpampianatra hampianatra siansa amin'ny teny kiriolona, sy ny fandikana ny lalao matematika amin'ny solosaina miisa 21 ho amin'ny teny kiriolona.
Raha iverenana ny any Matenwa, nitsidika tao aho indray zoma, raha nivory hiofana momba ny tenin-dreny ny mpanabe. Nahazo boky sy fanoroan-dalana ry zareo, ary niady hevitra amin'ny fomba iverenana sy hampiofanan'izy ireo olona bebe kokoa.
“Tamin'ny voalohany dia izahay irery no nampianatra tamin'ny teny kiriolona,” hoy i Abner Sauveur, mpiara-manorina ny sekoly. “Ankehitriny misy sekoly 10 tonga eto hiofana, isam-bolana. Rehefa nijery izany zava-niainana izany aho, dia mino fa aorian'ny 15, 20, 30 taona, mety ho efa maty aho, saingy mety azo heverina fa hiova tanteraka ny rafi-pampianarana ao Haiti.”
Saingy nandritra ny fotoam-piofanana, nizara boky fanao an-tanana izay tahaka ny tsy misy ifandraisany amin'ny fomba fampianarana amin'ny teny kiriolona i Sauveur. Niresaka momba ny fampitsaharana ny fanasaziana mihatra amin'ny vatana ireo boky ireo, momba ny fifandraisana mahomby amin'ny mpianatra sy ny fiarovana ny ankizy tsy ho tratran'ny fanararaotana ara-nofo. Ka fitaratra noho ny fampianarana amin'ny teny kiriolona ve i Matenwa, sa noho ny fanomezan-toerana ny zon'ny ankizy?
Nanontany ny mpampianatra aho : mbola hanana ny famirapiratany hatrany ve ity sekoly ity raha nampianatra tamin'ny teny frantsay ?
Valintenin-dry zareo? Tsy hisy mihitsy izany raha atao amin'ny teny frantsay.
Tadiavo ao amin'ny Facebook sy iTunes ny Tontolon'ny teny.
23 ora izayHaiti